Dagaallo ka socoda magaalada Darna ee Liibiya iyo Khasaare adag oo gaaray malleeshiyaadka Xaftar. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaallo ka socoda magaalada Darna ee Liibiya iyo Khasaare adag oo gaaray malleeshiyaadka Xaftar.
On May 8, 2018 217 0
Malleeshiyaadka la magac baxay Al-karaama ee hoostaga dagaal oogaha Liibiya ninka lagu magacaabo Khaliifa Xaftar ayaa go’doon bilooyin qaatay oo ay ku hayeen magaalada Darna kadib, waxay billaabeen howlgal ay ku doonayaan iney kula wareegaan magaalada.
Khaliifa Xaftar oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Banqaazi ayaa shaaca ka qaaday in malleeshiyaadkiisa ku sugan magaalada Darna uu ku amray iney qaadan howlgal ballaaran, oo lagu beegsanayo waxa uu ugu yeeray “Argagaxisada” oo uu ula jeedo kacdoon wadayaasha iyo Mujaahidiinta maamulaya inta badan magaalada.
Xaafadda Al-fataayix ee magaalada Darna ayuu dagaalku ka billowday, markii malleeshiyaadka Xaftar ay isku dayeen iney soo taqadumaan, balse waxaa dagaal kala horyimid ciidamada golaha shuurada Mujaahidiinta Darna iyo hareeraheeda, oo maamula magaalada.
Diyaaradaha Imaaraatka iyo kuwa Masar ayaa ka qeyb qaadanaya dagaalka ka socoda magaalada Darna, waxaana tan iyo shalay ay qaadeen duqeymo gaaraya ilaa 13 duqeymo, balse qadarta Alle hal ruux oo keliya ayaa ku dhintay.
Malleeshiyaadka Xaftar waxaa dagaalkan kasoo gaaray khasaare adag, warar aan helnay waxay sheegayaan in ugu yaraan 9 askari oo katirsan malleeshiyaadka ay ku dhinteen dagaalka, waxaana khasaarahaas culus kadib ay kasoo baxeen guud ahaan xaafadda Al-fataayix.
Shacabka muslimka ah ee magaalada Darna ayaa wajahaya xamlo adag oo uga imaaneysa Xaftar iyo dowladaha taageeraya duulaankiisa, waxaana muuqaneysa iney isku tashteen, Allena kaashadeen, diyaarna u yihiin iney difaacdaan dhulkooda.